बिषालु सर्पले टोक्यो ? अब चिन्ता नलिनुहोस पुदिनाले एकै सेकेन्डमा यसरि बिष निकाल्छ
[ May 24, 2019 ] भोलि शनिबार साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस	समाचार
[ May 24, 2019 ] चर्चित चलचित्र ‘दुई रुपैयाँ’ युट्युबमा रिलिज (फिल्मसहित)	समाचार
[ May 24, 2019 ] प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाइ दिन ऋषि धमला क्यामारा बोकेर दिल्ली पुगे	समाचार
[ May 24, 2019 ] त्रिशुलीमा ट्रक खस्यो, दुई घाइते	समाचार
[ May 24, 2019 ] विद्यार्थी बेहोस हुन थालेपछि कक्षा कोठाभित्रै ग्रह शान्ति पूजा !	समाचार
Homeरोचक / विचित्रबिषालु सर्पले टोक्यो ? अब चिन्ता नलिनुहोस पुदिनाले एकै सेकेन्डमा यसरि बिष निकाल्छ
September 29, 2018 Spnews रोचक / विचित्र, स्वास्थ्य/विशेष Comments Off on बिषालु सर्पले टोक्यो ? अब चिन्ता नलिनुहोस पुदिनाले एकै सेकेन्डमा यसरि बिष निकाल्छ
बहुगुण भएको बनस्पति हो पुदिना । पुदिनाको विषयमा धेरैले चासो लिन थालेका छन् । यसले धेरै रोगबाट हामीलाई बचाउछ । यसलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्नुको साथै यसलाई हामी अचारबानाएर पनि खाने गर्छौ । केहीलाई यसको स्वाद मन पर्ला त केहीलाई मन नपर्ला पनि । तर यसको गुण तपाईले थाहा पाउनु भयो भने सधैं पुदिना खान थाल्नुहुनेछ ।
पुदिनाको पातहरु सँगै ३ थोपा जती कागतीको रस मिलाएर मुहारमा लगाउने र पाँच मिनेट पछि यसलाई सफा गर्नु पर्दछ । एक हप्ता सम्म निरन्तर यसको प्रयोग गरेमा अनुहारमा आउने डण्डिफोर र डण्डिफोरबाट बनेका खिलबाट पुरै मुक्ति पाउन सक्नुहुनेछ ।
साथै करिब एक गिलास पानिमा पुदिनाका १० वटा जति पातहरु, थोरै कालो मर्चा र थोरै कालो बिरेनुन हालेर उमाल्नु पर्दछ । पाँच मिनेट उमालिसकेपछि पानी छानेर पिएमा रुघा खोकीबाट बच्न सकिन्छ । पेट दुखेको बेलामा अदुवाको रससँग यसको पात घोटेर पानी बनाएर खाएमा दुखाइ कम हुन्छ ।
मुख गन्हाउने समस्या भएकाहरुले पुदिनाको सुख्खा पातहरु लाई पिसेर मञ्जन गरे जसरी दाँतमा घोटेमा यसले मुखबाट आउने दुर्गन्धलाई कम गर्दछ । गिजालाई पनी यो विधिले बलियो पार्दछ । यसैगरी यदी शरिरमा दाद वा छालामा फुस्रोपना आएमा पुदिनाको पातलाई दिनमा चार पटक दाद आएको ठाउँ वा फुस्रो भएको ठाउँमा लगाएमा निको पार्दछ ।
पुदिनाले बिच्छी वा सर्पले टोकेको बिषलाई पनि यसले मार्छ । बिषालु ठाउँमा पुदिनाको पातको रस लगाएमा बिष मार्न सहयोग पुर्‍याउछ ।
ज्वरो आएका बेला पुदिनाको रस महमा मिलाएर खाँदा ज्वरो कम हुन्छ । अपच भएर पेट दुखेको छ भने पदिनाको रसमा अदुवाको रस र बिरे नूनको धूलो मिलाएर खानुहोस् । पिनासका बिरामीलाई पनि पुदिनाको रस लाभदायक हुने बताइन्छ ।
श्रीमतीको फिल्मको प्रशंसा गर्दागर्दै छोरीले धमलाको मुख बन्द गरिदिएपछि..
‘जति गाली गर्छौ गर, हिन्दीमा बोल्न छाड्दिन’ – राजेन्द्र महतो (भिडियो)
भोलि शनिबार साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस
चर्चित चलचित्र ‘दुई रुपैयाँ’ युट्युबमा रिलिज (फिल्मसहित)
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाइ दिन ऋषि धमला क्यामारा बोकेर दिल्ली पुगे
त्रिशुलीमा ट्रक खस्यो, दुई घाइते
विद्यार्थी बेहोस हुन थालेपछि कक्षा कोठाभित्रै ग्रह शान्ति पूजा !
दाइजोमा मोटरसाइकल नपाउने भएपछि मण्डपबाटै बेहुला हिडेपछी…
मोदीको जीतले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन सहयोग पुग्ने भन्दै विरञ्जमा र्‍याली !
आर्थिक अभावका कारण पुजा जिवन मरणको दोसाँधमा, सहयोगका लागि अपिल !
विशाल महादेवको मूर्तिसहित यस्तो बन्दै छ पोखराको पुम्दीकोट
पाँचथर हत्याकाण्ड: ९ जनाको सामूहिक अन्त्येष्टि, गाउँ नै शोकमा डुबे
टपरे: याे मान्छे मर्नु भन्दा एक अगाडि सम्म पक्कै पनि सा फेर्ने छ याे मेराे भबिश्यवाणी हाे .... लु जा
binod basnet: kun thulo kura ho ta ane pane pure khayara getdai ma sagarnatha chadara getako ta hoina ne😂😂😂😂😂 tara j hos…
Nikush Thapa: real hora